Kakhulu ngokuvamile yokuthi lapho sifunda noma iyiphi izindatshana ezitholakele imishwana efana "imikhiqizo professional izinwele", "imoto lochwepheshe." Yini umehluko imikhiqizo yezimonyo yalo mkhakha kusukela evamile? Futhi ingabe sikhona banayo ezinye inzuzo? Yilokhu uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Zonke amashampu ukuthi akudingeki ukuba kulotshwe izwi nezwi ethize "imoto ephrofeshinali", iyindlela evamile okuhloswe ukususa ukungcola kusukela izinwele. Lokho konke kuthengisa emashalofini ezitolo akuzona ngisho imoto. Umehluko phakathi lezi zimali kuphela izithembiso kwilebula, futhi omunye injongo - ukwenza izinwele zakho ihlanzekile ngangokunokwenzeka.
Uma kanti ngokwemvelo bangabantu ngempela got izinwele enempilo, ukusetshenziswa ezitolo ezivamile Shampoo nje emihle. Kodwa uma inkinga yakho izinwele, isibonelo, emaphethelweni wabhaxabulwa, ekhanda ezomile, izinwele uwela phandle, noma dandruff livela njalo, ke udinga kuphela ukusebenzisa imoto okhokhelwayo. Ngokuvamile ku amalebula ezivamile amashampu kunikeza eziningi zithembiso, futhi ngezinye izikhathi empeleni kweqiniso, kodwa uma izinwele zakho lilimele, awukwazi ukwenza lutho ngaphandle izimonyo professional.
amashampu Professional kuvetwa kahle ayelapha. Amathuluzi yalolu hlobo zenzelwe ochwepheshe ngqo ekwelapheni izinwele, hhayi yokuhlanza banal futhi udale ukukhanya. Kukhona amashampu onguchwepheshe izinhlobo ezahlukene izinwele: I-ezomile, ezilimele, gray, ukuhlukana, ezinemishwe, eside, abacaphuni, dlala, nokunye. ezinhle Ikakhulukazi professional imoto for izinwele ezinemibala. Kuyasiza ukuba eside umbala ohlalayo ayebuthaka, ukunakekelwa kakhulu ukuze izinwele ezinemibala.
Uma uqhubeka ayaqhubeka ephikisana mayelana nomehluko phakathi amashampu evamile nezobuchwepheshe, kuyafaneleka ukuthi ngokwemvelo ayikho nje amashampu professional ezifana "conditioning imoto +". Phela, air conditioning kuhloswe zonke ezinye izindawo ithonya njengoba kuqhathaniswa imoto, bese usebenzisa la mathuluzi njengendlela "ezimbili kwelinye" Awukwazi kuholele imphumela ongcono.
Uma unquma ukuthenga imoto professional, kufanele ukhambisane nayo yoke izincomo kuboniswe kwi isembozo. Uma uthi ingasetshenziswa hhayi ningi than kabili ngesonto, futhi kufanele kwenziwe. Lezi amashampu yiwona ikhambi izinwele zakho. Ngaphambi kokuthenga kufanele uthole iseluleko wezinwele. He lamula you nga khetha imoto professional ngqo yakho izinwele hlobo. Uma umngane ezinhle barber kungenjalo, ungacela mayelana ezifana izinwele izimonyo umthengisi. Badinga ukwazi okuningi ngalokhu ndaba ebucayi.
Phatha izinwele zakho ngazo zonke izindlela ongazicabanga. Phela, ubuhle Shag nethonya elikhulu ukubonakala kwalo muntu iyonke. izinwele enempilo futhi elihle isihluthulelo sempumelelo nabobulili obuhlukile, kanye Sinike esiphezulu ukubukeka uzilungise. Njengoba Bathi, ukuhlangabezana izingubo. Nikeza izinwele zakho ube ipharadesi ngosizo a imoto okhokhelwayo!
Highlights phezu izinwele brown: isithombe
Indlela anakekele begonias ekhaya: amathiphu namasu Wabasaqalayo sezimbali
Uma inhliziyo ithi "yebo", kanye nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu uthi 'cha'